XCMG igwe Manufacturers & Suppliers - China XCMG igwe Factory
XCMG excavator XE235C Nchịkọta zuru ezu na nkesa axle ibu nwere ezi uche iji nweta nkwụsi ike njem na-agba ọsọ na ọsọ njem kachasị dị ruo 40km / h iji ghọta ọsọ ọsọ na-ebufe saịtị.
XCMG moto grader
The XCMG moto grader adopts Dongfeng Cummins 6BTA5.9-C180-II turbocharged dizel engine, nke nwere nnukwu mmepụta torque na ike idobere ọnụọgụ na ala mmanụ ụgbọala oriri.
XCMG ụzọ ala
Minyan na-ejigide nkà ihe ọmụma ọrụ "Na-agba ọsọ na Okwukwe, Na-ekwe Nkwa, Lekwasị Anya Banyere Ndị Ahịa", na-etinye onwe anyị n'ihe ndị ahịa chọrọ, ma na-enye ngwaahịa na ọrụ dị elu na ezigbo ọnụahịa.
XCMG ụgbọ oloko
Asatọ patent usoro hụ na-eji ire ụtọ, elu arụmọrụ na ume nchekwa nke eweli, adiana, na luffing usoro.
Ibu dị arọ maka ọnọdụ okwute; na-arụ ọrụ na ngwaọrụ na n'ihu na n'azụ etiti atụmatụ oké osisi nke elu ike, ezi uche nkesa na ike ebu ikike.